Zvemari - Prairie State Legal Services
Prairie State Legal Services inotsigirwa neboka rakasiyana renheyo, makambani, vanhu, uye masangano ehurumende anopa hwaro hwakasimba hwesangano redu kutsvaga mukana wakaenzana kururamisiro kumatunhu edu anotambura.
Prairie Nyika inoitwa yakazvimiririra yekuzviongorora gore rega rega zvinoenderana nematanho eHurumende eUnited States ekuongorora pasi peHofisi yeManagement neBudget Circular A-133 nemitemo yeLegal Services Corporation. Nyika yePrairie inosaira IRS fomu 990 gore rega. Prairie State inodada nekuve yakawana 4-nyeredzi chiyero kubva kuCharity Navigator uye Platinum Seal yeTransparency kubva kuGuardStar.
ZVIMWE ZVAKAITIKA ZVEMAITIKO Ezvemari
2019 Zvemari Nyaya
2019 Fomu 990
ZVAKAITIKA ZVINOTAURWA ZVENYU
Chirevo cheGore re2018
Chirevo cheGore re2017
Chirevo cheGore re2016
Chirevo cheGore re2015
Chirevo cheGore re2014
6 maawa apfuura